Ungayithuthukisa kanjani isimo ngokusesha nokwenza ngcono kwewebhu kuwe?
Ake siqale ngokuthola ukuthi ukukhishwa kwosesho lwewebhu okwamanje kumele (kungenjalo i-SEO yendawo). Ukusebenzisa injini yokusesha kuyaziwa ngokusebenza kahle kuzo zonke izingcezu zolwazi ezithunyelwe kumakhasi akho wewebhu, ukuze zibenze zikhangele nakakhulu abahlaseli be-Google yokusesha ukubonakala okungcono kwe-intanethi ohlwini lwe-SERPs. Ngokucubungula ukusetshenzwa kwewebhu kuwebhu, kumelela inqubo yokwenza ibhizinisi lakho le-intanethi liboniswe phakathi kwemiphumela yokuqala yezicelo zokusesha zendawo. Ngokuvamile, imizamo enjalo yokusesha yewebhu isetshenziselwa ukusebenza ku-directory yezilinganiso nokukhangisa kokuqukethwe kwendawo ukuze kutholakale ukuthuthukiswa okusheshayo kwe-intanethi ekusebenzeni kwakho kwezohwebo. Ngezansi ngizoba nokucubungula okufushane kuzo zonke izinhlaka zokubhekana nokusebenza kwe-web ukusesha kusebenza ezingeni lendawo.
Phakathi kwezindaba ezibaluleke kakhulu lapha zimelela ikhasi lakho leBhizinisi Lami le-Google kanye nokwenza ngcono ukusesha iwebhu okudingayo. Kungani kufanele kuqala futhi kuqala? Ngenxa yokuthi kukholakala ukuthi iyimboni yokutholakala kwakho kwe-intanethi, enamathuba amakhulu kunazo zonke okumele aboniswe ngqo phakathi kwezicelo zokusesha zokuqala zamabhizinisi wesifunda. Kufanele kwenzeke ukuthi awukaze uvakashele ikhasi lakho leBhizinisi Lami le-Google, thola noma uqale ukugcwalisa kwakho osevele ukhona. Nasi uhlu lwezinto oyinconywa ukuthi uzimboze kufomu lakho lokusesha iwebhu: cacisa igama lakho lebhizinisi ngokugcwele, incazelo yayo yesifinyeto ngesimiso sokusebenza nezinombolo zocingo, isixhumanisi sekhasi lakho lokufika, kanye nezithombe ezithokozayo zephrojekthi yakho yokuthengisa. Ukwenza kanjalo, ungasebenzisa futhi i-Google Posts, ujoyine iGoogle Plus nemiphakathi ethile yanamuhla ngaphakathi kwayo. Futhi ungakhohlwa ukukhuthaza abasebenzisi abaningi ukuba bashiye ezinye izibuyekezo kwiwebhusayithi yebhizinisi lakho, ngenkathi bebeka okuqukethwe okusha nokubuyekeza imibhalo ekhona ngesikhathi.
Okulandelayo, qinisekisa ukuthi umkhankaso wokusesha kwakho webhubhu ukubheja kahle ekuchazweni kwesiqondisi. Ngikisela ukwenza isheke ngokukhetha elinye lamathuluzi wokuhlola Amanothi wokuvula Amanethiwekhi. Ngale ndlela uzokwazi ukubona ukuthi yikuphi kahle futhi kunoma yiluphi uhla lwemibhalo lwebhizinisi okubalulwe kuwebhusayithi yakho. Iningi lalezi zihlonzi zidinga izinyathelo kanye nezenzo ezifanayo, njengalabo esivele sihlanganise ekhasini le-Google Bhizinisi Lami. Ngincoma ukuba uhlole kabili ngoba izinjini zokusesha zikhetha ukukhombisa imiphumela enembile kuphela, ngakho kufanele ususe noma iyiphi idatha engalungile noma ehlukumezayo mayelana nebhizinisi lakho. Asikho isidingo sokukhipha isikhathi sakho nemizamo yakho, njengoba ukusebenza nalezi zinto ezimbalwa kungenzeka ukuthi kukunikeze umthelela oseduze ngokushesha ekusetshenzisweni kokusesha kwakho kwendawo, ngakho-ke ukuletha ukuthuthukiswa okusheshayo ekusezingeni lakho. Isinyathelo 3
Ekugcineni, ngiyeluleka ukuba uhlolisise kahle amaphrofayela enhlalakahle
. Khumbula, bayabalulekile, ikakhulukazi ngokuqondene nokwenza ngcono ukusesha kwakho kwendawo. Unganqikazi ukwenza uhlu lwamanye amaphrofayela omphakathi njenge-Facebook noma i-Twitter, ucabangela izinkomba ezinkulu kanye nezixhumanisi eziholela endleleni eya kuwebhusayithi yakho eyinhloko. Ukwenza kanjalo, qiniseka ukuthi ulondoloza ukuvuselela umsebenzi wakho wokuthumela, futhi ukhokhela ngokwanele okuqukethwe kwekhwalithi. Hlola okukhethwa kukho okukhulu kokuthengiswa kwezenhlalo, njengokuqashelwa kahle yi-Google nezinye izinjini, imizamo yakho lapha izoba nomthelela omuhle empilweni yakho yokusesha iwebhu ngokugcwele Source .